Ukuqaphela Ithuba | Martech Zone
ULwesibili, May 6, 2008 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Namuhla ntambama ngibe nesethulo nenkampani yabameli besifunda kuSocial Media. Bekumnandi ukubona inhlangano ebinokubona kusengaphambili ukuveza abasebenzi bayo kwabezindaba abasha. Umhlaba uyashintsha impela kepha kusenokungahanjiswa kahle amagama lapho ezokuxhumana nabantu 'yilokho okwenziwa ngabantu abasha' futhi kusathathwa ngokungathi sína.
Imboni Yamaphephandaba - Amathuba Alahlekile
Eminyakeni eyishumi edlule, ngangisebenza namaphephandaba futhi ngangiwabuka buthule babukela EBay futhi Craigslist. Babecabanga ukuthi kwenzelwa ama-geek nabantu abasha futhi… kuze kube yilapho isigubhu sezigidigidi zamarandi sikhishwa ngaphansi kwabo. Eqinisweni, ibingafakwanga impela, yadonswa ngobumnene.
Amaphephandaba amaningi abhala ngokumangala ngokukhula kwalobu buchwepheshe, engatatazeli ukuthi azoqothuka embonini yawo. Amaphephandaba amaningi ayenezinzwane zawo ku-Online Industry (i-InfiNet kwakungaleyo inkampani yami engumzali eyayisebenza nayo) kodwa ahluleka ukudonsa indima lapho kwakudingeka enze utshalomali oludingekayo… noma ngabe ayazi ukuthi sasisekhona isikhathi sokwenza lokho. Imigqa yenzuzo yezinkampani ibidonsiwe, futhi akekho umphathi obezothatha u-50% emaphethelweni ukuze kulandelwe lo mhlaba omusha.
Amaphephandaba ayenokusabalala nezinsizakusebenza zemali ukulwa nalokhu kulahlekelwa. Baze baba nethuba lomkhiqizo othembekile esifundeni. Esikhundleni sokuzivumelanisa, noma kunjalo, bakhomba iminwe futhi bashintsha umphathi oyedwa owayengaqondi ngokulandelayo owayengakuqondi.
Eminyakeni eyishumi ngangisephephandabeni, angikhumbuli nhlobo iseshini lapho othile angena khona axoxa ngobuchwepheshe obusha futhi wabuza noma waxoxa ngokuthi bangasetshenziswa kanjani ukuze bathuthukise ukusebenza kahle noma bakhulise inzuzo.
Bekuqabula namuhla ukubona ifemu yendawo inombono ohlukile!
IBurj Dubai - iSolid Foundation
Esinye sezilayidi esethulweni sami isithombe esihle se- Burj Dubai, isakhiwo esakhiwa e-United Arab Emirates esizodlula zonke ezinye izakhiwo. Kuhlelelwe ukuthi kuphothulwe ekupheleni konyaka ozayo futhi okwamanje kulinganiselwa ukuthi kunezindaba eziyi-162.
Izindaba eziyi-162 yisilinganiso sakamuva, noma kunjalo. Kunamahemuhemu okuthi umgomo ushintshile eminyakeni edlule, ngokwengxenye ngenxa yokulinganiselwa kobunjiniyela okungenzeka kugcizelele amandla esisekelo nokuthi ubude besakhiwo ayengakwenza ukukhuliselwa.
Ukubheka okukodwa esakhiweni futhi ungaqala ukuqonda ukuthi kungani. Isisekelo seBurj Dubai sikhulu ngokuphelele, futhi ama-spire thins njengoba ekhuphuka.
I-Social Media - Isisekelo Ebhizinisini
Imithombo yezokuxhumana iyi inkampani yakho ithuba lokuqala ukwakha isisekelo sokukhula okumangalisayo kule minyaka eyishumi ezayo. Ukusungula uphawu oluku-inthanethi ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana kanye nokuxhumana nabantu kubeka isisekelo sokuxhumana okuqinile.
Ngokufana newebhu, ukuqala namuhla kuzokunikeza inetha elikhulu lokuthwebula ivolumu enkulu yebhizinisi eminyakeni ezayo. Isimo sendawo siyashintsha. Izinjini zokusesha - ngisho neGoogle - zizolahlekelwa ukubambelela kwazo ekutheni sizulazula kanjani kuwebhu njenge mike amanethiwekhi qhubeka ukhule futhi uchume.
Lapho inkampani yakho iqala ukuzivumelanisa nalobu buchwepheshe, kuzoba ngcono lapho impilo yakho incike kuyo. Ifemu engikhulume nayo namuhla inamathuba ahlukile. Banethalente elisungule igunya futhi liphumela emacaleni akhulayo njengezigaba ezingancintisani nomthetho welungelo lobunikazi.
Ukube abasebenzi babo babelana ngalokho okuhlangenwe nakho online namuhla nokusungula online igunya, ikakhulukazi ngokwendawo, lizobanikeza ngamanethiwekhi ukukhulisa ibhizinisi labo kusasa. Isikhathi esivusa amadlingozi sale nkampani ikakhulukazi - bayinkampani evulekile, inkulu ngokwanele ukuba nomthelela, kepha incane ngokwanele ukuyiqondisa nokuzivumelanisa nale ndawo ngokushesha.
Ngiyathemba ukuthi basebenzise ngokunenzuzo futhi babone ithuba elitholwe ngabambalwa babo khona lapho egumbini!
Tags: Ama-AnalyticsSesha Marketing
Ngabe Uthathe I-Myers-Briggs? I-ENTP?
Umdlalo Wamanqamu We-Cisco I-Prize!
May 6, 2008 ku-11: 53 AM
Kukonke, ngiyavumelana nemigomo yalokhu okushoyo. Kodwa-ke, iSocial Media yisigaba esikhulu esikhula ngosuku. Cishe lokhu ukwenza ngaphakathi kwesethulo, kepha kufanele ukuthi wehlukanise iMedia Media ngezigaba futhi ukhombise ukuthi isigaba ngasinye singasetshenziswa kanjani ngokwamandla aso ngamunye.
Imidiya Yezokuxhumana ngokuyinhloko iyindlela yokwabelana ngevolumu. Ngakho-ke unokuhlukaniswa kwezinto ongathanda ukuzaba nokuthi ungathanda ukuzaba kanjani ngazo. Imicabango, noma ngabe ingobuchwepheshe noma eyomuntu uqobo, ingabiwa ngezinhlobo eziningi zemidiya yokuxhumana online. IVideo nayo inezitolo zayo. Inani lezitolo likhula ngesivinini esisheshayo. Kuyashesha empeleni, ukuthi kulula ukudideka ukuthi ungawudweba kanjani umugqa lapho 'usuzibandakanye' neSocial Media.
Kepha, into okufanele uyikhumbule yisici sokuqwashisa ukuthi umkhiqizo wakho, isisekelo solwazi noma umkhiqizo wakho uzowuthola kanye nje uma uchithelwa isikhathi ukumba ujule kancanyana kwi-Social Media. Njengoba ucwaningo lwakamuva lukhombisa ukuthi yize kukhula abasebenzisi be-Intanethi, ithrafikhi eya kumasayithi aphezulu kusuka onyakeni owedlule ayikakhuli ngesilinganiso esifanayo futhi yehle kwezinye izimo. Lokhu kungenxa yabantu abasebenzisa i-Social Media futhi ababheka okuqukethwe okuhle, okuhlanganisiwe.
May 6, 2008 ku-6: 54 PM
Isethulo siyaqhubeka ukwehlukanisa izindlela ezahlukahlukene nezobuchwepheshe ezisetshenzisiwe nokuthi ungazisebenzisa kanjani ngakunye - kusuka ekuxhumaneni nomphakathi kuya kubhulogi ku-twitter, njll. Ngiyaqhubeka nokukhuluma ngomthelela olinganiselayo (futhi ongenakulinganiswa) wobuchwepheshe ngamunye.
Kuningi kakhulu ongakufaka kokuthunyelwe okukodwa, impela! Lokhu bekungaba nengxoxo ende yehora. 🙂
Engifuna ukukugcizelela kubafundi bami ukuthi kufanele baqale namhlanje… bangabi nesimo 'sokulinda babone'. Uma ungakwenzi, ungabeka ikusasa lenhlangano yakho engcupheni.
Ngiyabonga Michael! Uhlala njalo uhlinzeka ngamazwana anokuqonda afaka umbala esihlokweni. Ngiyakujabulela kakhulu futhi ngikhuthaza wonke umuntu ukuthi avakashele ibhulogi yakho!
May 6, 2008 ku-3: 09 PM
Ngangisebenza eBoston Globe phakathi neminyaka yama-90. Babengabokuqala ukungagcini ngokubona umthelela wewebhu, kepha ukusizakala. http://www.boston.com
May 6, 2008 ku-6: 58 PM
Sawubona Jayce! Yebo, iBoston Globe, empeleni, yayingelinye lamakhasimende ami ngasekupheleni kweminyaka yama-90 futhi yenza umsebenzi omuhle ekusebenziseni amasu wokumaketha egciniwe. Baze basebenzisa amanye amathuluzi wokuhlaziya wokugcina engiwathuthukisile (kanye nabanye).
Amanye amaphephandaba, afana neToronto Globe and Mail, iHouston Chronicle, iSan Francisco Chronicle, iChicago Suburban Newspapers kanye neDetroit Press batshale imali ethe xaxa kwezobuchwepheshe obusha. Ngangikujabulela kakhulu ukusebenza nabo!
May 6, 2008 ku-3: 37 PM
Kungani la mabhizinisi akhona engashintshi? Ngoba kune-inertia enkulu iqhubeka ngendlela efanayo. UChristensen uyichaza kahle kakhulu I-Innovator's Dilemma.
May 6, 2008 ku-7: 01 PM
Isibonelo esihle. Kwesinye isikhathi abantu bangibuza ukuthi 'sizokwenziwa nini' ngokuthuthukiswa komkhiqizo wethu. Ngibatshela hhayi inqobo nje uma sisebhizinisini! Ukuqamba kudinga ubuholi obubonayo ukuthi izinkampani kumele ziqhubeke nokutshala imali emisha, kungenjalo zizoshabalala. Kungathatha iminyaka eyikhulu noma ngaphezulu… kepha zisazobhubha.
May 10, 2008 ku-8: 35 AM
Uma ufuna iphepha elimhlophe emithonjeni yezokuxhumana lidlulisele kumakhasimende akho, hlola lokhu kusuka ku-smashLAB eVancouver: